नेपालमा भेटियो बर्डफ्लुको नयाँ भाइरस, सरकारले लुकायो तथ्य – Halkaro
नेपालमा भेटियो बर्डफ्लुको नयाँ भाइरस, सरकारले लुकायो तथ्य
काठमाडौँ । नेपालका पक्षीमा पहिलोपटक बर्डफ्लुको नयाँ भाइरस फेला परेको छ । पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागका अनुसार गत १८ फागुनमा इटहरीको शान्तिटोलका पक्षीमा बर्डफ्लुको नयाँ भाइरस ‘एच५ एन८’ भेटिएको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार इटहरीको तालतलैयाका पक्षी र खनार क्षेत्रका कुखुरामा त्यस्तो नयाँ भाइरस फेला परेको तथ्य नेपालले लुकाए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको पुष्टि गरेको छ । यसअघि नेपालमा बर्डफ्लु ‘एच५ एन१’ भाइरस देखिँदै आएको थियो । तर, सुनसरीको इटहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको भाइरस नयाँ प्रजातिको भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. भीम आचार्यले बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।
← पढ्न विदेश जानेको लर्को
बिग बोसमा काम गरेर फर्किएपछि फिल्म बनाउन साथीकी माइज्यूको अपहरण ! →